Kulan loogaga hadlayay horumarinta ganacsiga oo maanta lagu qabtay Jowhar - Jowhar Somali news Leader
Home News Kulan loogaga hadlayay horumarinta ganacsiga oo maanta lagu qabtay Jowhar
Kulan loogaga hadlayay horumarinta ganacsiga oo maanta lagu qabtay Jowhar
Kulan ay soo abaabushay rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe loogana hadlayay horumarinta ganacsiga ayaa maanta lagu qabay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay qeybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada Jowhar iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ee magaalada Jowhar.
Ganacsatadii ka qeybgashay kulankan ayaa waxa ay ka hadleen muhiimada in la dhiso guddi ganacsi oo ka shaqeeya horumarinta ganacsatada oo heer degmo ah maadaama hore loo doortay guddiga ganacsatada gobolka Sh/dhexe dood dheer kadibna waxa ay iska dhex doorteen guddi ganacsato oo ka kooban saddex xubnood oo hogaaminaya ganacsatada degmada Jowhar.
Cabdi Xiirey Caraale oo ka mid ah ganacsatadii ka qeybgashay kulankan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ganacsatadu ay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii ay ugaga qeybqaadan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa guud ahaan ganacsiga gobolka Sh/dhexe.
Guddoomiyaha guddiga ganacsatada degmada Jowhar waxaa loo doortey Yuusuf Bocow jeelle halka guddoomiye ku xigeen loogu magacaabay ismaaciil siciid axmed.
Ugu dambeyntii kulankan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Sh/dhexe Ceydiid Maxamed Cabdulle waxana uu ugu hambalyeeyay guddiga ganacsatada cusub ee la doortay isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa ganacsiga iyo weliba suuqyada lagu ganacsado.
Rugta Ganacsataga gobolka Sh/dhexe ayaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Jowhar waxa ay ka fureen xarun u gaar ah iyagoo agab muhiim ahna ugu deeqay bukaanada ku jira isbitaalka dhimirka magaalada Jowhar.
kulanka ganacsatada magaalada jowhar